नवीन्द्रराज जोशी बाँच्नु हुन्छ भन्ने आशा छ : डा. झा : RajdhaniDaily.com - नवीन्द्रराज जोशीको अवस्था गम्भीर
Home प्रमुख नवीन्द्रराज जोशी बाँच्नु हुन्छ भन्ने आशा छ : डा. झा
काठमाण्डौ । मष्तिस्कघात भएका कांग्रेसका युवा नेता नवीन्द्रराज जोशीको अवस्था गम्भीर रहेको छ । गम्भीर अवस्थामा उनको काठमाण्डौको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ ।
अस्पतालले आज दिउँसो ३ बजे एक पत्रकार सम्मेलन गरी नेता जोशीको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा जानकारी गराएको छ ।
न्यूरो सर्जन डा. राजीव झाले परिवारलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार हिजो राति साढे १२ बजे देब्रे हात बाउडिएसँगै कमजोर महसुस गरेका जोशीलाई परिवारजनले राति नै वीर अस्पताल लगेका थिए । अस्पताल आउँदासम्म बोलिरहेका नेता जोशी वीर अस्पताल पुग्दासम्म बहोस् भइसकेका थिए । बेहोस भएपछि वीरमै सीटी स्क्यान गरिएको थियो र सो क्रममा टाउकोमा नराम्रोसँग रगत जमेको देखिएको थियो । अवस्था निकै गम्भीर देखिएपछि वीरकै डाक्टरहरुको सल्लाहमा नर्भिक अस्पतालमा ल्याइएको डा. झाले बताए ।
नर्भिकमा ल्याइसकेपछि जोशीको आँखाको नानी एकातिर फुलेको देखिएको समेत डा. झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो राम्रो संकेत होइन । ‘एकातिर त्यस्तो देखिनु भनेको आधा दिमागले काम नगरेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ।’ डा. झाले भने
बिहान साढे ३ बजे आफूले सो विषयमा खबर पाएको र आफू आइपुग्दा नेता जोशीको अवस्था निकै गम्भीर रहेको र उनी कोमामा पुगेको न्यूरो सर्जन डा. झाले बताए । सो क्रममा नेता जोशीलाई पटक–पटक बान्ता भएको र बान्ता फोक्सोमा पुगेको देखिएको थियो । फोक्सोमा बान्ता पुग्दा श्वास फेर्न गाह्रो भएको र इमेरजेन्सी इन्कुभेसन–पाइप राखेर श्वास फेराउने काम) गरिएको डा. झाले जानकारी दिए ।
नर्भिकमा ल्याइसकेपछि जोशीको आँखाको नानी एकातिर फुलेको देखिएको समेत डा. झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो राम्रो संकेत होइन । ‘एकातिर त्यस्तो देखिनु भनेको आधा दिमागले काम नगरेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ।’ डा. झाले भने ‘नर्भिकमा ल्याएर हामीले पुनः सीटी स्क्यान गर्दा टाउकोको बीच भागमा पानी जम्दै गरेको समेत देखियो । डा. झा भन्छन् उहाँमा सुगर, प्रेसरको समस्या पनि रहेछ । उहाँले रगत पातलो हुने औषधि पनि खाइरहनुभएको रहेछ । यस्तो व्यक्तिलाई सर्जरी गरिए रक्तश्राव नियन्त्रण हुँदैन । त्यसकारण विशेष रगतहरु व्यवस्था गरेर हामीले सानो ड्रिल गरी ड्रेन राखिदिएका छौं, त्यसबाट १३० एमएल पानी निकालिसकेका छौं ।’
डा. झाले जोशीको अवस्था स्थिर भन्न मिल्ने खालको नरहेको उल्लेख गर्दै भने ‘हामीलाई थोरै भए पनि उहाँ बाँच्नुहुन्छ भन्ने आशा छ । त्यही आशा राखेर हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं ।’
प्रेम वियोगपछि काम केन्द्रित कैटरिना
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री कैटरिना कैफले प्रेम सम्बन्ध टुट्दा त्यसको असर लामो समयसम्म पर्ने बताएकी छन् । अभिनेता रणवीर कपुरसँग आफ्नो प्रेम सम्बन्ध विच्छेद...
काठमाडौं । नेप्लिज तेक्वान्दो एकेडेमी (एनटीए)का खेलाडीले दुई अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन तेक्वान्दो प्रतियोगितामा भाग लिने भएका छन् । दुवै प्रतियोगिता पुम्से विधामा हुनेछ । जुलाई ७...
चन्द्रनगरमा ३ हजार १ सय ३१ परिवारले राहत पाए
प्रदेश Dhruba Lamsal - April 8, 2020 0
सर्लाही । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा चार दिनमा दिनमा ३ हजार १ सय ३१ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण सरकारले...
कोरोनाले लखेटिएका कर्णालीवासी नाकामा अलपत्र
प्रदेश ६ Dhruba Lamsal - May 24, 2020 0
वीरेन्द्रनगर । भारतबाट नेपाल आउँदै गरेको सयौं कर्णालीवासी सिमा नाकामा अलपत्र परेका छन् । रोजगारको लागि भारतको नैनिताललगायतका विभिन्न स्थानमा गएका नेपाली सिमा नाकामा...
भर्खरै Kumar Raut - August 7, 2020 0
सर्लाहीको एकै पालिकामा थपिए ७६ जना कोरोना संक्रमित
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - September 8, 2020 0
सर्लाही । सर्लाहीमा आज(मंगलवार) एकै पालिकामा ७६ जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरु थपिएको छ । आज थपिएको ७६ जना कोरोना संक्रमित कौडेना गाउँपालिकाका रहेको जिल्ला...
टोकियो । प्राणघातक कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहन जापानमा एक महिनाका लागि विद्यालयहरु बन्द गरिएको छ । साथै बिटीएस कन्सर्ट समेतका सबै मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु...
एजेन्सी - April 10, 2021